Wuxi Flyt Teknolojiyada Tamarta Cusub Co., Ltd.
Marawaxadaha Dabaysha Horizontal
FK Gawaarida Dabaysha Horizontal
S Marawaxadaha Dabaylaha Hor
Marawaxadaha Dabaysha Joogtada ah
Marawaxadaha dabaysha taagan ee FH
Marawaxadaha Dabaysha ee Vertical
Marawaxadaha dabaysha ee FX
Q Marawaxadaha Dabaysha ee taagan
R marawaxadaha dabaysha taagan
Toy Marawaxadaha Dabaysha
Hitachi wuxuu ku guuleystey saldhiga magdhowga tamarta falcelinta badda ugu horreysa adduunka! Awoodda dabaysha badda ee Yurub
Dhowr maalmood ka hor, dalad uu hogaaminayo shirkadda weyn ee warshadaha ee Japan Hitachi ayaa ku guuleysatay lahaanshaha iyo xuquuqda howlaha xarumaha gudbinta korantada ee mashruuca 1.2GW Hornsea One, oo ah wershedda ugu weyn adduunka ee dabaysha ka baxda oo hadda shaqeysa. Dalladda, oo loo yaqaan 'Diamond Transmissi ...
Noocyada awoodda dabaysha
In kasta oo ay jiraan noocyo badan oo marawaxadaha dabaysha ah, haddana waxaa lagu soo koobi karaa laba qaybood: marawaxadaha dabaysha ee jiifka, halkaas oo wareegga wareegga wareegga dabayshu uu la mid yahay jihada dabaysha; marawaxadaha dabaysha ee dhidibka taagan, halkaas oo dhidibka wareegga wareegga wareegga dabaysha uu ku toosan yahay gr ...
Maxay yihiin qaybaha ugu muhiimsan ee marawaxadaha dabaysha
Nacelle: Nacelle wuxuu ka kooban yahay qalabka muhiimka ah ee marawaxadaha dabaysha, oo ay ku jiraan sanaadiiqda iyo matoorrada. Shaqaalaha dayactirka ayaa ka geli kara naaska nalka iyada oo loo marayo munaaradda marawaxadaha dabaysha. Dhamaadka bidix ee nacelle waa rotor-ka dhaliyaha dabaysha, oo ah garbaha iyo usheeda dhexe. Wareegyada wareega: ca ...
Marawaxadaha dabaysha tamarta tamarta korantada
Waxay loola jeedaa habka wax soo saarka ee loogu beddelayo tamarta korontada, shidaalka foosha (dhuxusha, saliidda, gaaska dabiiciga ah) tamarta kuleylka, tamarta nukliyeerka, tamarta qorraxda, tamarta dabaysha, tamarta dhulka hoostiisa, tamarta badda, iwm. loo yaqaan koronto dhalinta. Loo adeegsaday ...
Marawaxadaha dabayshu ma waxay dhalisaa kal-beddelaad hadda socda ama mid toos ah?
Marawaxadaha dabayshu waxay dhalisaa isbeddello kaladuwan Maaddaama awoodda dabayshu tahay mid aan degganayn, wax soo saarka koronto dhaliyaha tamarta waa 13-25V beddelaad hadda, oo ay tahay inuu saxo xeedho, ka dibna batteriga keydinta lagu soo oogo, si tamarta korantada loo soo saaro by dabaysha ge ...
Tijaabada isku halaynta marawaxadaha dabaysha
Qeybiyeyaasha qeyb ka mid ah marawaxadaha dabaysha waa inay sameeyaan baaritaan rasmi ah si loo hubiyo kalsoonida qalabka. Isla mar ahaantaana, sidoo kale waa lagama maarmaan u ah tijaabinta isku-dhafka noocyada marawaxadaha dabaysha. Ujeedada baaritaanka isku halaynta ayaa ah in la helo dhibaatooyinka suurtagalka ah sida ugu dhaqsaha badan uguna macquulsan ...
Wuxi Flyt New Energy Technology Co., Ltd., waa soo saare xirfadle ah oo leh nidaam marawaxadaha dabaysha yar yar iyo dhex dhexaad ah iyo qalab ku habboon.
Dabaqa 2aad, Aaga Xafiiska, Lambarka 712, Wadada Zhenze, Xuelang Subdistrict, Binhu District, Wuxi, China